विचार/ब्लग Archives - Aadarsha Khabar
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार February 13, 2021 722 Views
फेरी पनि प्रतिगमनका बिरुद्द लड्नु छ । आफै लडेर ल्याएको जनयुद्द्को उपलब्धि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनु छ , समाजवादी क्रान्तिको जग बसाल्नु छ । तसर्थ महान जनयुद्द्को गौरवपुर्ण इतिहास र बर्तमानका उपलब्धि प्रति गौरव गरौ […]
१७ पुष २०७७, शुक्रबार January 1, 2021 571 Views
म नेता हो,प्यारी च्यात्तिएको सारी नलगाउ है !हो प्यारि म नेता हो । म युवा नेता हो । मलाइ मेरो प्यारो भाइ भनेर माया गरि बोलाउने मेरा अग्रज पार्टीकाका नेताहरु हुनुहुन्छ । मलाइ केहि भयो […]
१८ आश्विन २०७७, आईतवार October 4, 2020 801 Views
खेतीपाती गर्नेले बाली उठाउनका लागि एक बर्ष पर्खनुपर्छ । उद्यम गर्नेले त्यसबाट प्रतिफल लिन कम्तीमा तीन बर्ष कुर्नुपर्छ । कुनैपनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न, सफलता हासिल गर्न, ख्याती कमाउन लामो संघर्ष र धैर्यताको जरुरत हुन्छ । […]
३१ भाद्र २०७७, बुधबार September 16, 2020 812 Views
सम्माननिय प्रधानमन्त्री के.पि शर्मा ओली ज्यू आबश्यकता र औचित्यका आधारमा होला भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट बिदा बिदा हुनु भएका डा. युवराज खतिवडा पुन: प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्ति हुनु भएछ। तपाईलाई अवगत नै छ होला हिजो १८ घण्टा […]
२६ श्रावण २०७७, सोमबार August 10, 2020 814 Views
पछिल्लो समय राजनैतिक फाटमा गर्मागर्मीको सृजना त्यतिबेला बाट सुरु भयो जतिबेला एम सी सी ले नेपालमा आफ्नो विमान अवतरण गराउन उचित विमानस्थलको खोजी गर्यो।चोक चोक गल्लीगल्लिमा एम सी सी ले दिने अनुदान र सहयोगको निकै […]
समाचारले दिएको खुशी ,आत्मबलको प्रेरणा
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार June 2, 2020 354 Views
केही दिन भयो म निकै खुशी छु ।अनि सन्तुष्ट पनि अरुको नजरमा मेरो यो सुन्तुष्टि अनी खुशी सामान्य होला । केही व्यक्तिको लागि झ्याउलाग्दो पनि हुन सक्छ । तर मेरा लागि जिवनकै स्मरणीय समय बन्दिएको […]
खबरदार ! जातीय विभेद अब सैह्य छैन
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार May 31, 2020 537 Views
अमेरिकामा केही दिन अघि एउटा गोरो (व्हाइट) वर्णको पुलिसले एकजना कालो (ब्ल्याक) वर्णको मानिसलाई घाँटीमा घुँडाले अँठ्याएर राख्यो जसको कारण त्यो मानिसको मृत्यु भयो । समाचार सबै मिडियामा आए र पढेर हामीले अचम्म मान्यौं । […]
कोरोनाले सम्झिएको गाउँ
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार May 26, 2020 928 Views
म जन्मिएको ठाँउ पहाड ! जिवनकालको १३ वर्ष यहीँ बित्यो। कोरोनाको महामारी बढेसंगै नेपालले पनि लकडानउनको घोषणा गर्यो। बुटवलमा अध्यनरत म लकडाउनका कारण आफ्नो सहज जीवनयापनका लागि गृह जिल्ला पर्वतमा आए। यसबेला गाउँ र सहरका […]
मनिषा एक बर्दी बिनाको नेपाली सैनिक
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार May 21, 2020 319 Views
दिल निशानी मगर भारतीय टेलिभिजनमा नेपालबारेको ‘बडी खबर’ प्रशारण भइरहेका छन् । सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय टेलिभिजनमा आएका एकलौटी अन्तरवार्ताहरूमा नेपाली र भारतीय नागरिकहरूको एकप्रकारको ‘भर्चुअल वार’ भैरहेको छ । शायद भूकम्पपश्चात भारतीय मिडियामा नेपालबारेका […]
कोरना सँगै लिपुलेकको चिन्ता
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार May 14, 2020 430 Views
आज विश्व नै कोरनाले तहस नहस भईरहेको छ ।लाखौले ज्यान गुमाइसकेका छ ।लाखौ सङ्क्रमित भएका छन त करौडो जनता यसको चपेटामा परि दैनिकी चलाउन समेत हम्मे हम्मे परिरहेको छ । र कोरनाबाट नेपाल पनि अछुतो […]